Kwanele ukubheka ikhaya lakhe, futhi cishe uyokuthola ifenisha eliphukile noma ukunquma ukuthi sekuyisikhathi ukushintsha into. Akubalulekile ukusebenzisa ezitolo befuna usofa yesimanje - kusukela ifenisha ubudala, ungakha wobuciko yokuqala, esiyingqayizivele, ukhululekile futhi eliphezulu. Ngisho noma ungenayo isipiliyoni kule ukukhanda ifenisha, ungakwazi ungakhathazeki - kukhona inala tutorials isiqophi namabhuku eyokusiza. ifenisha upholstered, enziwe ngezandla zakhe, akungabazeki kusimangaze izivakashi zakho, uma they thola cishile ukuthi wenze ngokwakho. Uma ungafuni, awukwazi ukwenza ifenisha kusuka ekuqaleni, futhi ukulungisa elidala, isibonelo, ukushintsha ukuma kwakhe. Ngakho, ungakwazi ngcono kakhulu induduzo ukugcizelela ubuntu babo. Kodwa kumelwe uqonde ukuthi lokhu ngeke njalo. Isizathu salokhu kungaba uhlaka, okuyinto kuzolinganisela izinketho zakho. Ngakho, ifenisha okuzenzela angase aphume njengoba ubufuna.
Lapho kufanele ngiqale?
Kufanele kuqashelwe ukuthi uma kungekho nakho nempahla, awukwazi nje ukwenza okuthile Amazing futhi eyingqayizivele. Ukuze uqale, baqonde ongakhetha eyisisekelo nokuthuthukisa. Kungase kube ezahlukene design SOFAS, armchairs, izihlalo abavamile, omatilasi, ekhishini emakhoneni, SOFAS nezihlalo. Ngokwemvelo kudingeke ukuba isebenze futhi uzinike isikhathi, kodwa ngemva kwalokho une iminyaka eminingi ngeke lokujabulela indalo yakhe. Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza, usadinga Thenga kakhulu ezithile amathuluzi, Upholstery Indwangu, ifenisha nezinto. Konke lokhu kungatholakala ekhaya noma ukuthenga esitolo. Hhayi-ke, uma ufuna ukwenza ukushintsha design of the usofa, kufanele ufune imigwalo ifenisha upholstered.
Uma unquma ukwenza okuthile ngezandla zakho, khona-ke akufanele skimp on izinto. Uma kungenjalo, lokhu ifenisha izothatha hhayi nje oyifunayo, futhi yena ibukeka hhayi kakhulu. Okokuqala sidinga ukhethe Foam okuhlala kanye eliphezulu kanye Indwangu. Le phrojekthi ngokwalo kufanele kube njengoba yasekuqaleni futhi eyingqayizivele, kodwa uma wayethanda wena okuthile esitolo, ungazama udale into efanayo noma nse. Ukukhetha Foam ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile - ke akufanele kube ezinzima kakhulu futhi uthambile kakhulu. Ngokwesibonelo, ufuna ukwenza usofa ezokwenza phinda out embhedeni lapho isihlalo wathutha yonke indlela phambili kwi ekhethekile Umhlahlandlela komzila, futhi ngemuva kalula ijikelezwe 90 °, bese babeka nendawo. Khumbula ukuthi lokuthunga of ifenisha upholstered kungenziwa nge umshini ekhethekile, okuyinto nakanjani singaba usizo kabi.
Kanjani ukwakha usofa lokuqala
Ukuze wenze lokhu, udinga lokhu okulandelayo:
Ukuze base -. Plank ukushuba 5 cm ububanzi 15 cm nge ngezikulufo uya usayizi base 190h65 ukubona Qaphela ukuthi ifenisha upholstered ngezandla zabo angeke kwenziwe ngaphandle Uhlaka ..
MDF isetshenziselwa phansi. Izingxenye ishidi awashintsheki nhlangothi zombili komzila futhi ogibele lesi sakhiwo imilenze.
Ukuze ukuphumula kwaba sasivumela elithambile, kuwufanele ukuthenga holofayber zihambisana polyurethane foam. Nale impahla kanye Indwangu, ungakha uhlobo oluthile emuva, okuyinto esimweni ababebuthene ibekwe thwi, ohlangothini ezithambile kuya phezulu.
Egoqekayo indlela - lena isinyathelo sokugcina. Empeleni, lokhu iluphu elula ukuthi ngezikulufo yokuxhuma esihlalweni futhi emuva. Kungaba kuhle uma ngaphezu wenze ohlangothini chipboard izindonga noma Yakha ngebhokisi lamapulangwe.
indima ebalulekile eyadlalwa emcabangweni wakho ngalolu daba. Lapho ekhetha Upholstery nokudala ukuklanywa usofa, ungakha into eyingqayizivele futhi eyingqayizivele. Futhi lapho izivakashi ukuza nawe akubuze, kulokho esitolo uthenge khona, singakwazi ngeqholo sithi lena ifenisha self-ezenziwe, futhi ukwenze kube okwakho. Ungaqiniseka, kusimangaze izivakashi zakho kungaba awapheli, futhi ekhaya lakho kuyoba emangalisayo sibonge.
Ngaphambi kokuba uqale, yenza iplani ezincane, okuyinto zama ukuthola konke kungase kudingeke, futhi ukuthola icebo ifenisha esizayo. Uhlelo lwakho izobandakanya izigaba eziningana:
Uhlu izingxenye, izingxenye kanye izesekeli.
Isigaba 1 - umsebenzi wokwenza amalungiselelo.
Isigaba 2 - yokubeka ukukhiqizwa.
isigaba Okwesithathu - uzimele inhlangano (kwesokunxele futhi izinhlangothi kwesokudla).
Padding (in the case of ifenisha upholstered). Kwangezikhathi for ifenisha upholstered kufanele kube nezinhlobo eziqinile ezakha eqinile.
Ikhwalithi kanye umnotho
Izinzuzo ifenisha esinjalo kubaluleke kakhulu. Into yokuqala ukuba uqaphele ukuthi ungakwazi kahle ukuze ulondoloze. Ukudala usofa enjalo ungenzani mayelana izikhathi 3-5 ezishibhile ukuthenga nse esitolo. Kodwa khumbula ukuthi kubalulekile ukuze ulondoloze ngokuhlakanipha, ngaphandle kokulahleka izinga. Ungakhohlwa ukuthi ifenisha upholstered, adalwe ngezandla zabo, mhlawumbe kangcono ngisho, kunalokho ifektri, ngoba uyobe ukulawula ngokwakho lo mbuzo. Uzoba qiniseka ngokuphelele ukuthi usebenzisa ugodo ezomile, eliphezulu Foam nokunye okunjalo. Lokhu kusho ukuthi usofa yakho kuzoba njengoba nje uthanda, setha ngaphansi unesithakazelo ubukhulu kanye nezidingo. Ngokuhamba kwesikhathi, uma kudingekile, nawe ngeke inkinga ukwenza constriction bese ugcine futhi. Kuyaphawuleka ukuthi nempahla ezithambile efanayo ungenza wonke umuntu has a encane lamathuluzi, futhi ine emva kwakhe kukhona eliphansi ukuqeqeshwa.
Uma ufuna upholstered ifenisha ngezandla zakhe kwakungabantu echwepheshile ke uzodinga uthole ithuluzi elandelayo saziso: umshini fugovochnym (nakuba kungenzeka futhi ngaphandle kwalo, kodwa hhayi efiselekayo ke), stapler (ukhetho best - emoyeni, kodwa kungasetshenziswa by kagesi noma ngesandla), i sokuprakthiza kagesi, Jigsaw, umshini wokuthunga futhi efektri yokusaha amapulangwe. Kodwa uma ungenayo isipiliyoni, kufanele silalele iseluleko lochwepheshe - uqale ukulungisa ifenisha ephukile ubudala. Ngakho, uyokwazi ukufunda oyiyo ngokuningiliziwe futhi baqonde indlela futhi yini okufanele uyenze. Awudingi ukuba bahlanganyele kuphela SOFAS zabo, ungaya nomndeni wakho noma abangani, hhayi nje ukuze ajabulise zona, kodwa futhi ukuze uthole okuhlangenwe nakho efanele. Awu, bese ungakwazi ngisho ukwenza kube njengoba ukulungisa, kanye kudalwa izinto zalo.
Umbhede uyisiyingi "Ikea": incazelo kanye nokubuyekeza
Countertops Manzi for ekhishini yokugezela. Amatafula eyenziwe ngetshe
Ukuze wenze elungisa egumbini lokugezela. Ikhabethe izandla sanitary siqu
Ububanzi iminyango. Ububanzi iKhabhinethi
Dzho Tornton: Biography emfushane ka-hockey
Azuri Royal Resort 5 *, Makadi Bay, Egypt: Incazelo ye ehhotela, izithombe kanye nokubuyekeza
Isimo sendawo "Rosetta": incazelo ye-satellite nesithombe
Ingcindezi womuntu - ongakhetha izinga kanye ukuhluka
Izindlela eziyinhloko yokuxazulula ukungcoliswa komoya
American uchungechunge TV: uhlu okungcono
Monocytes kwaphakanyiswa igazi - kusho ukuthini?
Tinkondlo Nge-oda ku-inthanethi: Indlela hhayi ukuthi usephutheni kukhethwa